Tonia Vaovao Ho An’ny Lingua Portiogey Ary Fiovàna Ao Anatin’ny Fitarihana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2018 1:50 GMT
Arahaba daholo! Tsy ela akory izay, nanapaka hevitra i Gustavo Xavier ny hiato tsy ho toniandahatsoratry ny Lingua Portiogey intsony noho ny fahateren'ny fotoanany. Tsy maintsy ambarako fa anahavita be tokoa izy nitantana ny tranonkala, ary ho zavadehibe tokoa ny hanàna azy ho toy ny mpandika lahatsoratra amin'ny hoavy. Misaotra betsaka anao ry, Gustavo!
Izao koa, tiako ny miarahaba an'i Melina Coelho (eny, mifampizara anarana amin'ny anaran'ilay mpanoratra malazar) tafiditra ho ao anatin'ny tarik'ireo toniandahatsoratra! Breziliana i Melina, monina ao São Paulo, ary miasa ho an'ny tenany manao fandikàna lahatsoratra! Mandika avy amin'ny sy ho amin'ireto teny roa ireto izy: Anglisy sy Portiogey! Nanao asa be tokoa izy nanampy tamin'ny fampandehanana ny tranonkala!
Araho ny bilaoginy, Critical Thinking in Wonderland (Saina Mitsikera ao anatin'ny Tanin'ny Fahagagàna), mba hahafantaranao mismisy kokoa ny asa sorany!
Ankehitriny ny tarika mpanoaka lahatsoratra ho an'ny Portiogey dia ahitàna an'i Esther, Ricardo, sy Melina! Tongasoa, Melina!